RW Rooble oo casumaad u diray Madaxda D/Gobaleedyada & Taariikhda la qabanayo?
May 2, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 10
MUQDISHO(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Faderalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in uu maanta casumad u diray madaxda dawlad gobaleedyada iyo Gobbalka Banaadir, taas oo ay uga soo qeybgali doonan shirka dhameystirka hanaanka Doorashooyinka ee Soomaaliya.
Raysalwasaare Rooble ayaa sheegay in Madaxdu ay ka tashan doonaan arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana dhameystirka heshiiskii 17kii September iyo Is afgaradkii Baydhabo ee 16kii Feb, kaas oo dhabaha u xaraya doorashooyinka.
Afhayeen u hadlay xukuumadda Faderaalka ayaa tilmaamay in uu shirkaas ka dhici doono magaalada Muqdisho, 20-ka bishan May, taas oo ku beegan Khamiis loogana wada hadli doono arrimaha doorashooyinka.
Mdaxda dawlad gobaleedyada ayaa la casumay, waxaana muuqata in durba Raysalwasaare Rooble dardargalinta arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya, markii uu shalay Madaxweyne Farmaajo ku wareejiyey hanaanka doorashooyinka.
Majirto cid katirsan dhinacyada oo wali ka jawaabay casumaada Raysalwasare Rooble, balse mucaradka ayaa goor sii horeysay soo dhaweeyey hadalkiisi xalay oo ay sheegeen in uu qeyb weyn ka qaadanayo arrimaha doorashooyinka sidii loo hormarin lahaa.
Madaxda Jubbaland & Puntland ayaa dhawan sheegay in ay Muqdisho tagayaan oo kaliya hadii ay casumaad ka helaan Beesha Caalamka, balse aysan ka qeybgali doonin kulamo ay ugu yeerto dawladda Faderalka ee Soomaaliya, hadda lama garanayo jawaabtooda.
Aniga oo ah MADAXWEYNAHA kaligii is magacaabay ee SSC(sida kornayl Muusaha Hargaysa) waxa aan soo dhoweynahayaa casuumadda uu fidiyey wasiirka koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya, Mr/Eng. Rooble.
Aniga oo taa ka duulaya, waxa aan ka codsanayaa in dhammaan garabyada ay casuumaddani ku socoto ay si BILAA SHURUUD ah ku aqbalaan. Waan la socdaa oo maamulka Kismaanyo waxaa samaystay dawladda Kenya, iyada oo uu haddaba culayskaasi jiro, bal isku daya in aad casuumadda aqbashaan.
Hadaad rabtaan Ms. MONICA JUMA, wasiirka difaaca ee Kenya, waad ku soo darsan kadhaan waftiginna maaddaama ciidankeedu uu Kismaanyo iyo qaybo ka mid ah jubbooyinka iyo Gedo ku sugan yahay, iyaga oo (nasiib darrada jidha) oggolaansho ka haysta dawlad Soomaaliyeed!
Waxa kale oo aan arkayey in midawga murashixiinta 4ta degmo ay JEENAN & BADAR ka dhergeen. Reer hebel intaan oo Geela & gaari badar ah buu keenay; iyaa, waar meesha waa laga dhergay. Waxay isoo xasuusiday shirkii SAMAREEB ee kal hore. Laakiin waxa aan isweydiiyey, haddii reer Hir-shabeele & Galmudug ay sidaa u abaabul badan yihiin, waxa ay UGUS isaga dhicin waayeen?!
Maantaa ugu danabayday oo UGUS nabaddoon caan ah bay ku dileen degmada Raaga Ceele, ee Shabeelaha dhexe. Shaki weyn baa marka igalay ah in reer Hir-Shabeele, Galmudug & UGUS looga taliyo isku meel. Waxaa taa sii xoojiday markii UGUS ay si buuxda u taageertay jabhadaha hubaysan ee ku xoolo qalanaya Muqdisha dhexdeeda! Arrintaasi waxa ay u baahantahay baaritaan xeeldheer. Jaalle ra’iisal wasaare, arrintan aad hoos ugu fiiri.
Gunaanadkii, dadkaygu waa soo dhoweynahayaan casuumadda uu fidiyey ra’iisal wasaaraha qaranku. Waxa aanan ku baaqahayaa in loo dhega nuglaado. Wbt
WALEE CASHA-DIIDOW WAXKAA DARAN AYAA SOO BAXAY OO AH (DOORASHO-DIID) EE ADIGU HOWSHAADA LAGUU IGMADAY GUDU KADIB DOORASHO DIID SOMALI WAY ARKI OO WAX AYAA LAGA QABAN.
Mukhaawiga gaamurayoow, taariikh aad si dhab ah utaqaanno ayaad iskudayday inaad been iyo borobagaan qayaxan kudaboosho, waana tan kusaabsan cilaaqa qotodadheer ee Kismaanyo iyo Kenya kadhexeysa. Mana aha wax lagaa aqbali karo inaad sidaas ugudigato.
Cilaaqada ay Kenya iyo jubbooyinka ay Kismaanyo caasimadda utahay wadaagaan waa mid soojireen ahayd oo suraabkii Soomaaliya loogu magacdaray xataa qarni iyo in kabadan soo taxnayd, waana taariikh ay beesha Dhulbahante (ee aad sheegato) oo beelweynta Harti iyo Kablalaxba katirsan ay tolkooda Absame lawadaagaan.
Xiriirkoodu waxaa uu marka hore xididkiisu fidsanyahay ilaa iyo waagii ay Saldanadii Cummaaniga ahayd min jubbooyinka ilaa dhulxeebeedka Kenya iyo ilaa iyo Sinjibaar katalin jirtay, Kismaanyo iyo Kablalaxuna ay kaalin dhaxalgal ah kagajireen.
Marka aan dacaayaddaada rakhiiska ah kusookoobona, xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Absamaha kadhexeeya waa mid salka kuhaya dhacdadii iskudaygii inqilaabkii milatari ee sanadkii 1982dii Kenya ka dhacday, taasoo ay reer tolkeena Ogaadeen oo milatariga Kenya dowr weyn kuleh qummaati udhiciseeyeen oo dawladdiina kusamatabixiyeen. Wixii waagaas kadambeeyay Ogaadeenku waxay noqdeen Soomaalida Kenya amnigeeda laguhalleeyo oo taladeeda masiirigana wax lagalawadaago.
Waxaa intaas usii weheliya inay Absamuhu NFD Soomaalida kale kaga badanyihiin oo uguna tunweynyihiin; tolkooda jubbooyinkana ay toos iskuguxiranyihiin. Kenya waxay Absmaha ugudeysaa abaal taariikheed oo ay Absamuhu kagaleen, taasna waa wax dunida caadi uga dhaca. Ugudambeynna, Kenya waxay Soomaaliya kujoogtaa igmasho caalami ah; Absame dalka makeenin.
Runta iyo xaqana kaxig abidkaa.
suraabkii Soomaaliya loogu magacdaray HORTII xataa qarni iyo in kabadan soo taxnayd,
Akhyaarta sharafta leh waa idin salaamay si kal iyo laaba oo xushmadi ku dheehantahay.
Tobankii beri ee Ramadaanka (cashara awaakhir) ugu dambaysay ayaa la galaye ducada ha la badiyo. Marka kowaad nin walbowba naftaada cadaab ka ilaali. Marka labaad ummadeenna Soomaaliyeed ee tiiha ku jirta ha loogu duceeyo inay dantooda gartaan oo khilaafku ka suulo.
Su’aashaadii magacayga kusaabsanayd jawaabteedu waa macnaha labaad ee aad adigu kumacneysay (malabka asliga ah). Taasu waa taas.
Waa sax kheyrka aad inafartay, laakiin labo arrimood Soomaalida wacdigaas ugudar:
(i) In aanay habboonayn in Rabbil Caalaminka Bisha Ramadaan oo keli ah mu’min la iskaga dhigo oo sanadka intiisa kalena wax walba la iskaqasto. Addoonka muslimka ahi waa inuu daqiiqad kasta camalkiisa (qawl iyo ficilba) iskula xisaabtamo.
(ii) In aysan Soomaalidu ducadu waxba taraynin haddii aanay iyadu marka hore dadaal badan kubixinin inay iskudhaqdo hannaanka samaawiga ah ee ay Rabbi iyo Rasuulkiisu guddoonsiiyeen. Rabbi duco aan daacad laga ahayn ma aqbalo. Waa in marka hore niyadsamidii iyo dadaalkii lala yimaaddo. Soomaalidu danteedu Diinteeda ay ugujirtaa oo wayna ogtahay xaqiiqadaas; inay kalasoobaxdona waa waajib iyada saaraan ee duco umabaahna.
Waa iska hadley Casho Diid, warkaa Hobyo ha l.a. aado. sheeg marka hore Agendaha iyo Points, marka ka did ayaa la kulmi karaa. Wax cad oo ka duwan luqadii ismaqiiqe farmaajo ayaa loo baahanyahey. Sidoo kale tar-tiibaadka amniga in lagu heshiiyo ayaa was kasta ka horeysa.
Rooble waa gadaal ka gaar goob dumis.
Xilkiisii ayaa laga haystay oo haddana loogu manna sheeganayaa in loo deyn doono.
Rooble waa nin doohan, waana doqon aan aqoon xilkiisa iyo waxa uu yahay.
haddii uu weli ka tilmaan qaadanayo Farmaajo Aakhiro u daah!
haddii kale waa inuu la tashadaa dadkii farmaajo dalka ka qabtay oo weydiiyaa sida ay wax u rabaan.
Farmaajo is irrelevant. The would be tin-pot dictator is a spent force and no one bring him back.
The sooner Rooble realises that, the better!
Rooble bacaac, waxaa ka maqan waayo aragnimo siyaasadeed isagoo aan la tashan ayuu ku leeyahay waan idin casuumay ee kaalaya , ma xoolo uu lee yahay baa mise waa caruur uu dhalay ma iska imanayaan haduu u waco.. Yaaab
Waxay ahayd in uu Madaxda uu casuumayo marka hore isagu u tago la soo tashado si uu u abuuro kalsooni isaga lagu qabi karo.. ii kaalaya waa maxay ?